Uphando olungcono, Iziphumo ezingcono: Iplatifomu yoPhandoYenza indlela | Martech Zone
Yenza indlela liqonga lemarike lophando oluzenzekelayo kwaye yenye yezinto ezimbalwa kwihlabathi jikelele ezenzelwe ngokukodwa inkqubo yokwenza uphando yonke.
Iqonga lenza ukuba kube lula kwaye kukhawuleze iinkampani ukuba zifikelele kulwazi olubalulekileyo lwabathengi kuwo onke amabakala okuphuhliswa kwemveliso kunye nenkqubo yokuthengisa ukuze kwenziwe izigqibo ezingcono zeshishini. Ukuthatha inyathelo elinye ukuya phambili, i-Methodify yenzelwe ukuba yenziwe ngokwezifiso, inike iinkampani ingxelo yabathengi kulo naluphi na uhlobo lwemveliso, ukuthengisa okanye umbuzo onamava- nkqu nezo bangakhange bacinge ngazo okwangoku.
Yenza indlela wakhawulwa ngelixa wayeqhuba uvavanyo lokuphinda-phinda ngeyona bhanki inkulu yaseCanada. Iqela leMethodify lijongane nomceli mngeni wokubanceda ukuba benze uphando ngakumbi lwabathengi ngelixa befumana ingxelo ekumgangatho ophezulu ngokukhawuleza.
Ibhanki yayijamelene nemicimbi eqhelekileyo kumashishini namhlanje-ixesha elibalulekileyo lokuguqula iimveliso kunye namaphulo ajikeleze, zimbalwa izibonelelo zokusebenza kunye nokuncitshiswa okukhulu kohlahlo-lwabiwo mali. Ngelixa bafuna ukubandakanya ukuqonda ngakumbi kwabathengi rhoqo kwinkqubo yabo, bayayazi nembono yesiko, ukuthengisa kunye nokuvavanywa kwephakheji yokubandakanya ukubandakanya izifundo ezinde, ezintsonkothileyo ezinokuthi zicothe kwaye zibize.
Masibeke umxholo malunga noku: imibutho ifuna izigqibo ezingaphezulu zokuxhaswa yidatha, ibeka uxinzelelo olukhulu kumaqela abo ophando angasebenziyo kunye namaqela ohlalutyo lwedatha. Kwaye siyazi ukuba ukubeka umthwalo opheleleyo wombutho kwisandla sabasebenzi yinto ebangela intlekele.
Oku kukhokelela kumaqela entengiso athatha iindlela ezimfutshane kwaye asebenzise izixhobo zophando ezinjengee-Facebook polls ukufumana ingxelo yabathengi. Obu buchule be-DIY buhlala buquka ukungavumi okwenzululwazi, okujongela phantsi iindlela zophando eziqinisekisiweyo, ukungakhathaleli iikhrayitheriya zedemokhrasi kunye nokunyusa umngcipheko wokukhetha icala kunye nemibuzo ekhokelayo.
Endaweni yokuzama ukuthintela iindlela zophando lwezenzululwazi, iMethize ifuna ukunceda iimveliso zijolise kwimizamo yabo yokubandakanya abathengi kuyo yonke inkqubo yophuhliso kunye nentengiso.
Ukujongana nale mingeni, Yenza indlela yenzelwe ukuba liqonga:
Ivumela abathengisi ukuba bavavanye kwangoko kwaye rhoqo (besebenzisa indlela yovavanyo kunye nokufunda ehambisa iziphumo ezikhawulezayo- hayi elinde ukutyhilwa okukhulu kwinyanga kamva);
Izisa umthengi kwincoko kuwo onke amabakala ophuhliso kunye nokuthengisa;
Ibeka ubungqongqo kwinkqubo yophando.
Indlela yokuFezekisa njani iiNjongo eziPhambili
Ukunika amandla okuvavanya rhoqo, Yenza indlela yakhiwe malunga nefilosofi ye-agile. Isiseko sokuQinisekisa kuqinisekisa iziphumo zophando ezijika ngokukhawuleza kwinqanaba lamaxabiso elisebenzayo. Inkqubo yenkampani ihambisa i-ROI engcono kubathengisi kunye namaqela okuqonda, ibondla ngempendulo eqhubekayo yabathengi ngokufutshane, uphando lwemizuzu emi-5 ngokuchasene nophando lwemveli lwemizuzu engama-10 oluthatha iiveki kwiziphumo.
Ukubeka ngokungqongqo kwinkqubo yophando, bona ibhokisi emnyama iindlela eziqinisekisiweyo ezibhalwe ngabaphandi abaziwayo. Indlela ebuzwa ngayo imibuzo, indlela ezilandelelana ngayo; akukho mntu unokutshintsha loo ndlela. Oku kuqinisekisa umlinganiso kunye ne-algorithms zihlala zingaguquguquki. Nangona kunjalo, uphawu lunokucela ukuvula kunye nokutshintsha indlela yokwenza, lenze indlela entsha kwiqonga. Luphawu kuphela olukwaziyo ukufikelela kule ndlela intsha.
Yenza iMeko yoFundo
Enye yeemveliso ze-whisky ezithengisa kakhulu eCanada, Ubulumko bukaJP, eveliswa yiCorby Spirit and Wine Limited, isetyenzisiwe iMethize ukunceda ukuyila nokucokisa elinye lawona maphulo abaluleke kakhulu awakha amiliselwa kumzi mveliso wotywala- Bambelela phezulu, enike abantu ithuba lokuthambisana ngendlela enkulu .
Ekuqaleni kocwangciso lwephulo, u-JP Wiser waseka iqela elalibandakanya amaqabane e-arhente avela kumacandelo ahlukeneyo kwaye-umsonto olukiweyo ngenkqubo yocwangciso lomkhankaso-uvavanyo kunye nokwenza kwabo iqonga, Methodify.
Ekugqibeleni, uphawu lwalufuna ukukhuthaza abantu baseKhanada kwilizwe lonke ukuba babeke ixesha elifanayo kunye nokhathalelo kubuhlobo babo njengoko babefaka iwhiskey yabo. Ukwenza njalo, iqela labo le-arhente lenze umbono wokuvelisa umkhankaso wokuqala ogqitywe ngumsebenzisi we-JP Wiser's, unikezela abathengi ithuba lokugcoba esidlangalaleni izihlobo zabo kwiibhodi zebhodi, unomathotholo nakumajelo asekuhlaleni. Bengazi ukuba loluphi uhlobo lwee-toast abaza kuzifumana kwaye zeziphi iindlela zokunxibelelana kakuhle noku, bazibandakanya neMethodify ukwenza uvavanyo kunye nokwenza into eza kuqinisekisa ukuba iphulo liyimpumelelo. Ngokusebenzisa i-Methodify ukuzisa ilizwi labathengi rhoqo ngakumbi kuphuhliso, iphulo ekugqibeleni yenzelwe abathengi, ngabathengi.
Kuba iziphumo zinokuhanjiswa ngaphakathi kweentsuku ezi-1-2, iqabane ngalinye learhente likwazile ukudibanisa ingxelo yabathengi kwangoko kwizicwangciso zabo. Endaweni yokuthintela ukukhula kuyilo, uphando endaweni yoko lwasebenza njengesantya.
Uvavanyo loPhando lweNtengiso lubandakanyiwe
Uvavanyo lwommandlaUvavanye imimandla eyahlukeneyo yoyilo ukufumanisa ukuba leliphi icala elihambelana ikakhulu nemarike ekujoliswe kuyo
Uvavanyo lokuSebenza ngobuChuleUkuvavanywa ukuba ngawaphi amaqhinga ngaphakathi kumhlaba ophumeleleyo awayefunwa kakhulu ziithagethi, kuzo zombini isiNgesi nesiFrentshi.
Sebenzisa iqonga le-agile njenge Yenza indlela ukwenza izigqibo kuyo yonke inkqubo yentengiso kunike iqela le-JP Wiser's ulwazi ukuba abanakubavavanya ngabathengi ngenye indlela. Umzekelo, ngebengazange bavavanye imimandla yengqondo ngaphambi kokubandakanya iqonga lophando lwe-agile, kodwa oku kungqineke kubalulekile njengoko abenzi bezigqibo abaphambili eCorby bahlulwe kwimimandla yokuqala ebonisiweyo. Ikwancede ukubeka phambili ukubekwa phambili kwi-intanethi, ngaphandle kweintanethi kunye namava asetyenzisiweyo kwiphulo ngokusekwe kwingxelo yabathengi.
Iphulo kunye nophawu lwentengiso lubonwa njengemikhwa yokukhula okunamandla njengesiphumo, kodwa ezona ziphumo zibalulekileyo zavela kumabali abo kunye nefuthe uphawu olunalo kubudlelwane babantu. Ukusuka kwisindululo kwibhodi yezaziso eToronto ukuya kwindawo ephilayo yokuwela umda kubuhlobo baseMelika naseCanada, kubandakanya abantu abangama-50 kumacala omabini omda eDetroit, eMichigan naseWindsor, e-Ontario, kwikhaya le-JP Wiser's distillery.
Zine iindawo apho i-Methodify ime bucala ngaphandle kwabakhuphisana nabo:
Kukho imfuno ecacileyo yeqonga lophando kwi-Intanethi elinikezela inqanaba elifanayo lokuqina njengokuqokelelwa kwedatha yesiko ngelixa ikwabonelela ngokulula ukusebenzisa ujongano njengezisombululo ezininzi zanamhlanje ze-DIY.
Amandla okwenza iqonga leenkampani ngokwezifiso;
Njengomnye wabangeneleli bokuqala kwimakethi ezenzekelayo, i-Methodify iseta imigangatho kunye nokwenza ingomso kuphando oluzenzekelayo lweemarike;
Inzala yeminyaka engama-20 kolu shishino phakathi kwenkampani ebambe iMethify, iDelvinia, kunye neAquingCanadians, iphaneli yokuqokelela idatha kwi-Intanethi;
Ukuzinikela kuphando kunye nophuhliso lokuqhubeka nokwenza izinto ezintsha ngokusebenzisa inkampani yabazali, UDelvinia.
Ukulungele ukufunda ngakumbi?
Bhalisela i-Demo yokuDatha
tags: zebhankiBMOfintechuphando lwefintechubulumkoiqonga lophando lwentengisoyenza indlelauphandouphando